ပေါ်လစီ | Law & More B.V.
Law & More ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဤရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်သင့်အားအကြောင်းကြားရန်၊ Law & More သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလေးစားပြီးကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်စွာကိုင်တွယ်ရန်သေချာစေသည်။ ဤ privacy privacy ကြေငြာချက်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအချက်အလက်ဘာသာရပ်များအားအသိပေးရန်တာဝန်ရှိသည် Law & More ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ဤတာ ၀ န်မှာ General Data Protection Regulation (GDPR) မှရရှိသည်။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဖော်ပြချက်တွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းများ Law & More ဖြေပါလိမ့်မယ်။
Law & More သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထိန်းချုပ်သူဖြစ်သည်။ Law & More မှာတည်ရှိသည် De Zaale 11 (5612 AJ) Eindhoven ။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဖော်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများပေါ်လာပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ဖုန်းနံပါတ် +31 (0) 40 369 06 80 သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်လူတစ် ဦး အကြောင်းသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး နှင့်ဆက်နွှယ်သောအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးဖြစ်သည်။ သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလူတစ် ဦး အကြောင်းတစ်ခုခုပြောပြသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဒီ privacy ကြေငြာချက်ထဲမှာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကအချက်အလက်အားလုံးကိုဆိုလိုတယ် Law & More သင့်ထံမှဖြစ်စဉ်များနှင့်သင်ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်။
Law & More ဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဒေတာဘာသာရပ်များမှပံ့ပိုးပေးမည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်းတွင်သင်၏အမှုကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နှင့်အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံများသို့မဟုတ်ဝဘ်ပုံစံပေါ်တွင်သင်ဖြည့်ထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်များဖြစ်သော Cadastral Registry နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ကုန်သွယ်မှုမှတ်ပုံတင်မှရရှိနိုင်သည်။ Law & More ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးတက်စေရန်နှင့်သင်နှင့်ဒေတာဘာသာရပ်တစ်ခုအနေဖြင့်သင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ဘယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖြင့်ပြုလုပ်သည် Law & More?
ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဖော်ပြချက်သည်အချက်အလက်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်သောလူအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည် Law & More. Law & More ကျွန်ုပ်တို့သည်သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်ဆံရေးရှိလိုသူသို့မဟုတ်ရှိလိုသူများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ဒီထဲမှာအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သည်:
(အလားအလာ) ဖောက်သည် Law & More;
၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေကို Law & More;
ကုမ္ပဏီနှင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသူများ Law & More ရှိပြီးသားဖြစ်လိုသည်သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်;
၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ည့်သည်များ Law & More;
အဆက်အသွယ်သောအခြားလူတစ် ဦး Law & More.
Law & More သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လုပ်ဆောင်သည် -
တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငှားရမ်းပါကသင်၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်။ ကိစ္စရပ်၏သဘောသဘာဝအပေါ်မူတည်ပြီးသင်၏အမှုကိုကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အတွက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလည်းရယူရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ငွေတောင်းခံရန်အတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများသို့ကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်သည်။
Law & More သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစနစ်တစ်ခုအတွင်းမှတ်ပုံတင်ပြီးသင့်အားသတင်းအချက်အလက်ပေးရန်ဤအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည် Law & More။ သင်နှင့်ဆက်ဆံမှုမရှိပါက Law & More (သေး), သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအဆက်အသွယ်ပုံစံကိုအသုံးပြုပြီးသတင်းအချက်အလက်ကိုတောင်းခံနိုင်ကြသည်။ Law & More သင့်ကို ဆက်သွယ်၍ သင့်အားတောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်အတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်သည်။
Law & More သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတရားဝင်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဆောင်ရွက်သည်။ ရှေ့နေများနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအရကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အထောက်အထားကိုခိုင်လုံသောအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းပေါ် အခြေခံ၍ အတည်ပြုရန်တာဝန်ရှိသည်။
Law & More စုဆောင်းခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။ သင်သည်အလုပ်လျှောက်လွှာတစ်ခုပို့သောအခါ Law & Moreသင်၏အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သတ်၍ သင့်အားတွေ့ဆုံမေးမြန်းရန်ဖိတ်ကြားခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။
Law & More လူမှုကွန်ရက်များဖြစ်သော Facebook, Instagram, Twitter နှင့် LinkedIn တို့ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် ပတ်သက်၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသင်အသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာလူမှုမီဒီယာကွန်ယက်များမှတဆင့်ရယူနိုင်သည်။
၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏စီးပွားရေးအသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာရန် Law & More Rotterdam ရှိ Leadinfo ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် names ည့်သည်များ၏ IP လိပ်စာများကို အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီအမည်များနှင့်လိပ်စာများကိုပြသည်။ အိုင်ပီလိပ်စာမပါဝင်ပါ။
Law & More သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအောက်ပါအကြောင်းရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်သည်။
Law & More သင်ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အခွင့်ပြုချက်ပေးသောကြောင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်ဤသဘောတူညီချက်ကိုအချိန်တိုင်းရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
မင်းငှားမယ်ဆိုရင် Law & More တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်သည့်အချိန်နှင့်အတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်မည်။
တရားဝင်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုလိုက်နာရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာငွေကြေးဆိုင်ရာဥပဒေအရရှေ့နေများသည်အချက်အလက်အချို့ကိုစုဆောင်းသိမ်းဆည်းရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအခြားသူများအနေဖြင့်ဖောက်သည်များမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
Law & More ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တရားဝင်အကျိုးစီးပွားရှိပါကနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အချိုးအစားမညီသောပုံစံဖြင့်သင်၏ privacy ကိုသင်၏အခွင့်အရေးကိုမချိုးဖောက်သောအခါသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သည်။
Law & More သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်လိုအပ်သောအခါသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများသို့သာဖော်ပြပေးသည်။ ၎င်းတွင်သဘောတူညီချက်များ၏နိဂုံးချုပ်ခြင်း၊ (တရားဝင်) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ခြင်း၊ Law & Moreထိုကဲ့သို့သောအိုင်စီတီပံ့ပိုးပေးအဖြစ်။ ဖြည့်စွက်ကာ, Law & More ထိုကဲ့သို့သောကြီးကြပ်ရေးသို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားခန့်အပ်ထားသောအခွင့်အာဏာကဲ့သို့သောတရား ၀ င်တာ ၀ န်ရှိသဖြင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်သည်။
ပရိုဆက်ဆာသဘောတူညီမှုသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကိုယ်စား ပြု၍ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည် Law & More။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ပရိုဆက်ဆာတိုင်းသည် GDPR ကိုလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဖွင့်ထားသည့်တတိယပါတီများ Law & Moreသို့သော် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး အနေဖြင့် GDPR နှင့်အညီလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်စာရင်းကိုင်များနှင့် notaries များပါဝင်သည်။
Law & More သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးနှင့်အကာအကွယ်ကိုအလွန်တန်ဖိုး ထား၍ အန္တရာယ်နှင့်သင့်လျော်သောလုံခြုံရေးအဆင့်ကိုသေချာစေရန်သင့်လျော်သောနည်းပညာနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအစီအမံများကိုပေးသည်။ ဘယ်တော့လဲ Law & More တတိယပါတီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ Law & More Processor ကိုသဘောတူညီချက်ထဲမှာယူခံရဖို့အစီအမံများနှင့်ပတ်သက်။ သဘောတူညီချက်များမှတ်တမ်းတင်ပါလိမ့်မယ်။
Law & More အထက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များကိုရောက်ရှိရန်သို့မဟုတ်ဥပဒေများသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများကလိုအပ်သည်ထက် ကျော်လွန်၍ ဆောင်ရွက်နေသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလိုအပ်သည်ထက်မပိုအောင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
ဒေတာဘာသာရပ်များ၏ privacy အခွင့်အရေး
သီးသန့်တည်ရှိမှုဥပဒေအရ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်နေစဉ်၊ သင်၌အခွင့်အရေးအချို့ရှိသည်။
သင်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည် Law & More ဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်ရန်။ Law & More ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုအောက်ပါအခြေအနေများတွင်ဖျက်ပစ်ရမည် -
ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်မည်သည့်တရား ၀ င်အကြောင်းပြချက်မျှမရှိသည့်အပေါ်တွင်သင်၏သဘောတူညီချက်ကိုသင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလျှင်၊
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတရားမ ၀ င်စီမံဆောင်ရွက်လျှင်၊
အကယ်၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဥပဒေအရတာ ၀ န်ယူမှုနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ဖျက်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည် Law & More အချို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းသင်ယုံကြည်သောအခါကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကန့်သတ်ရန်။
ညာဘက် data တွေကိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူရန်
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုသင်ရရှိပိုင်ခွင့်ရှိသည် Law & More ဖြစ်စဉ်များနှင့်အခြား controller ကိုသူတို့အား data တွေကို transmit ရန်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအချိန်မရွေးသင်ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် Law & More.
ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း (သို့) ပြီးစီးခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊ Law & More အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာသို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]။ သင့်တောင်းဆိုချက်အတွက်အဖြေကိုလေးပတ်အတွင်းသင်ရရှိပါလိမ့်မည်။ အခြေအနေများရှိနိုင်ပါသည် Law & More သင်၏တောင်းဆိုမှုကို (အပြည့်အဝ) အကောင်အထည်ဖော်။ မရပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ရှေ့နေများ၏လျှို့ဝှက်မှုသို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာထိန်းသိမ်းမှုကာလပါ ၀ င်သည်။